जस्को चर्चा छ : अमलाचौरका दुई माओवादी नेता एक उमेदवार, एक स्टार प्रचारक ! – ebaglung.com
जस्को चर्चा छ : अमलाचौरका दुई माओवादी नेता एक उमेदवार, एक स्टार प्रचारक !
२०७४ कार्तिक २५, शनिबार ०९:१२	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
बागलुङ २०७४ कात्तिक २५ । यस अघी बागलुङ जिल्लाबाट चुनावनै नलडेका दुई जना माओवादी नेताहरु मध्य एक जना मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधी सभा सदस्यको उमेदवार बनेका छन भने अर्का स्टार प्रचारकको रुपमा देखिएका छन् । बागलुङ जिल्लाको साबिक अमलाचौर गाविसका माओवादी नेता व्दय दीनानाथ शर्मा र देबेन्द्र पौडेल यस अघि बागलुङ जिल्लामा कुनै तहमा निर्वाचन लडेका छैनन् ।
बाम गठबन्धन पछी नेता देबेन्द्र पौडेल जिल्लाको क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधी सभा सदस्यको उमेदवार बनेका हुन् । आफु १ नं क्षेत्रको भएपनि २ नं क्षेत्रबाट टिकट पाएपछी उनी अहिले त्यतै व्यस्त रहेका छन् भने उनको स्टार प्रचारकको रुपमा नेता दीनानाथ शर्मा अहोरात्र खटिएका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराईका अति निकट मानिने पौैडेल पछिल्लो समय भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिबाट अलग्गिएर माओवादी केन्द्रमा पसेका हुन् ।
बागलुङ जिल्लाको क्षेत्र नं १ बाट नेपाली काँग्रेसका पूर्व सभासद हरि खड्काको असामयिक निधन पछीको उप निर्वाचनमा माओवादी पार्टीले आधिकारिक उमेदवार बनाउने निर्णय गरी बागलुङ सदरमुकाम आएका नेता दीनानाथ शर्मा निर्वाचनमा पराजीत हुने डरले मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने एक दिन अगावै मुटु सम्वन्धी समस्या देखाएर पोखरा गएका थिए भने अन्तिम समयमा माओवादी केन्द्रले अर्कैलाई उमेदवार बनाएको थियो ।
बागलुङ बजारमा ७० लिटर घरेलु मदिरा नष्ट !
प्रवास : काँडेवासको स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको लागी जापानी यन ८ लाख संकलन !